COVID-19 က အမျိုးသားတွေကို ပိုပြီး ထိခိုက်စေနိုင်မလား။ - Hello Sayarwon
Dr. Htet Htet Zaw Win မှ ရေးသားသည်။3ရက် အကြာက တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ကိုဗစ်က ကျားမမရွေး၊ အသက်အရွယ်မရွေး ကူးနိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် အမျိုးသားတွေမှာ ပိုပြီး အထိအခိုက်များနေတာကို တွေ့လာရပါတယ်။ ကူးတာရော၊ သေဆုံးနှုန်းရော၊ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေ ခံစားရတာရောပေါ့။ အမျိုးသားတွေမှာ ဘာလို့များ ကိုဗစ်က ထူးခြားပြီး ပိုဖြစ်နေရတာလဲ။ ဘာလို့ သေနှုန်းတွေ၊ နောက်ဆက်တွဲတွေ ပိုဖြစ်နေရတာလဲဆိုတာကို လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ . . . . .
COVID-19 က အမျိုးသားတွေမှာ ပိုဖြစ်နိုင်သလား။
လေ့လာချက်တွေအရ အမျိုးသားတွေမှာ ဖြစ်နှုန်းရော၊ သေဆုံးနှုန်းရော မြင့်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ သေနှုန်းဆိုရင် အမျိုးသားတွေက အမျိုးသမီးတွေထက် ၂.၄ဆ ပိုများနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတွေကတော့
အမျိုးသမီးတွေမှာ ရှိတဲ့ X ခရိုမိုဆုန်းက ခုခံအားနဲ့ဆိုင်တဲ့ မျိုးဗီဇတွေ ပိုများနေတဲ့အတွက် ပိုပြီးခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်။ ဟော်မုန်းအရကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း အမျိုးသမီးတွေမှာဆီတဲ့ အီစထရိုဂျင်က ခုခံအားဆဲလ်တွေကို ပိုပြီးတုံ့ပြန်နိုင်ပါတယ်။ တက်စတိုစတီရုန်းကတော့ ပြောင်းပြန် သဘာဝအရ ခုခံအားကို ချပေးနိုင်တဲ့ သတ္တိရှိနေပါတယ်။ SAR-CoV-2 ဗိုင်းရပ်စ်ကြိုက်တဲ့ ACE-2 ပရိုတင်းကလည်း အမျိုးသားတွေမှာ ပိုပြီး များနေတဲ့အတွက် ပိုးများများပိုဝင်နိုင်၊ များများပိုပွားနိုင်ပါတယ်။
အမျိုးသားတွေက သူ့ကိုယ်ကိုယ် သန်မာတယ်လို့ ထင်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါက သဘာဝပါပဲ။ ခွန်အားကြီးမားတယ်၊ သန်မာတယ်လို့ ယူဆတဲ့အတွက် နေတာထိုင်တာလည်း သိပ်ဂရုမစိုက်ပါဘူး။ တုံးတိုက်တိုက်၊ ကျားကိုက်ကိုက်ပေါ့။
ခုခံအားကျစေနိုင်တဲ့ အမူအကျင့်တွေ ဖြစ်တဲ့ ဆေးလိပ်သောက်တာ၊ အရက်သောက်တာတွေကို အမျိုးသားတွေက ပိုလုပ်တတ်ကြတာကြောင့် တကယ်တမ်း ပိုးဝင်လာခဲ့ရင် ပြန်ပြီးနာလန်ထဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။ အဝလွန်တာကလည်း သူတို့က ပိုများတာကြောင့် ပိုပြီးတော့လည်း ခံရပါတယ်။
လူနေမှု အဆင့်အတန်းအရလည်း အိမ်ထောင်ဦးစီးတွေ၊ မိသားစုဝင်ငွေရှာသူတွေ ဖြစ်နေတာကြောင့် တကယ်တမ်း ထွက်ပြီး ပိုက်ဆံရှာဟေ့ဆိုလည်း သူတို့ပဲ လူကြား သူကြားထဲ သွားရတာပါ။ ဒါကလည်း ကူးစက်မှုများစေတဲ့ အကြောင်းတွေထဲက တစ်ချက်ပါပဲ။
ခုနကလို ပြောခဲ့တဲ့ အမူအကျင့်တွေ (ဆေးလိပ်သောက်တာ၊ အရက်သောက်တာ)က ခုခံအားကျစေတာအပြင် နောက်ဆက်တွဲ နာတာရှည်ရောဂါတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ ဆေးလိပ်သောက်တာကြောင့် အဆုတ်ရောဂါ၊ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ၊ အရက်သောက်တာကြောင့် အသည်းရောဂါ။ ဒီရောဂါအခံတွေ ရှိနေရင် ပိုးဝင်ကူးစက်ခံရရင် ပိုခံစားရသလို နာလန်ပြန်ထူလာရင်တောင်မှ အရင်လို ပြန်ဖြစ်ဖို့ ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။
COVID-19က အမျိုးသားတွေမှာ နောက်ဆက်တွဲ ဘာတွေဆက်ခံစားရမှာလဲ။
ပြင်းထန်တဲ့ ရောဂါကို ကျော်ဖြတ်လာပြီးပေမယ့် Post traumatic stress disorder (PTSD) ကြောက်လန့်စရာဖြစ်ပြီး နောက်ဆက်တွဲစိတ်ရောဂါလို့ ခေါ်မလားပဲ။ ရောဂါဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ အိမ်ပြန်ရောက်လာပေမယ့် စိတ်ဓာတ်ကျတာ၊ မှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်းတာ၊ မေ့လွယ်တာ၊ အာရုံစူးစိုက်မရတာမျိုး ကြုံရပါတယ်။နဂိုရှိပြီးသား စိတ်ရောဂါတွေ ပြန်ကြွလာတာမျိုးလည်း ဖြစ်တ်ပါတယ်။
ရောဂါမခံစားရသည့်တိုင် အတူနေမိသားစုထဲက တစ်ယောက်ယောက်မှာ ပိုးကူးစက်ခံရရင်လည်း ပတ်ဝန်းကျင်က ကျဉ်မှာကို ကြောက်တာနဲ့ တစ်ခုခုဖြစ်သွားမှာကို ကြောက်တာနဲ့ စိုးရိမ်စိတ်တွေ များပြီး စိတ်ဖိစီးနေတတ်ပါတယ်.
ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲလက္ခဏာတွေ ဖြစ်တဲ့ ရင်ဘတ်အောင့်တာ၊ မောတာ၊ အရင်ကလောက် အပင်ပန်း မခံနိုင်တာမျိုးကိုလည်း လနဲ့ချီပြီး ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုဗစ်ကနေ ပြန်ကောင်းလာပေမယ့် လောင်းရိပ်အောက်က မလွတ်နိုင်သေးတဲ့ ‘long hauler‘ များလို့ သူတို့ကိုယ်သူတို့ သမုတ်ကြပါတယ်။
ခုနောက်ပိုင်းမှာ ကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့ အမျိုးသားတွေမှာ ဝှေးစေ့အောင့်တဲ့ လက္ခဏာတွေပါ တွဲတွေ့လာရပါတယ်။ ဝှေးစေ့မှာ ACE-2ပရိုတင်းတွေ အများကြီး ရှိတဲ့အတွက် ဗိုင်းရပ်စ်က အလွယ်တကူဝင်လာနိုင်ပြီး ဝှေးစေ့နဲ့ သုက်ပို့ပြွန်တွေကို ရောင်ရမ်းစေပါတယ်။ သုက်ရည်နဲ့ သုက်ကောင်တွေကို ထုတ်လုပ်ပေးနေတဲ့ နေရာဖြစ်တာကြောင့် အခန့်မသင့်ရင် မျိုးအောင်နိုင်စွမ်းကို ထိခိုက်သွားနိုင်ပါတယ်။
ဒါ့ပြင် ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးလို့ ပြန်လည်သက်သာလာတဲ့ အမျိုးသားတွေမှာ လိင်တံမထောင်မတ်နိုင်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ မထောင်မတ်နိုင်တဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကတော့ အများကြီးပါပဲ။ စိတ်ကြောင့်၊ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သွေးကြောတွေထိခိုက်ပြီး မထောင်မတ်နိုင်တာ စသဖြင့်ပေါ့။ ဘာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် လိင်တံမထောင်မတ်နိုင်တာက အမျိုးသားတွေအတွက်တော့ ကြီးမားတဲ့ ပြဿနာပါပဲ။
ကိုဗစ်က လူတိုင်းမှာ ဖြစ်လာနိုင်ပေမယ့် အမျိုးသားတွေမှာ ပိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဖြစ်လာရင်လည်း ကောင်းလာဖို့ ခက်သလို၊ ကောင်းလာခဲ့ရင်လည်း နောက်ဆက်တွဲတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အမျိုးသားတိုင်းတော့ မဟုတ်ပေမယ့် ကိုယ့်မှာ ခုခံအားထိခိုက်နိုင်တဲ့ အမူအကျင့်ရှိရင် သတိထားရမှာပါ။ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲရောဂါတွေကိုလည်း မေ့ထားလို့ မဖြစ်ပါဘူး။ ကိုဗစ်က ဖြစ်ပြီးရင် ပြီးသွားတာပဲဆိုတာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ အတတ်နိုင်ဆုံး ပိုးမကူးစက်အောင် နေထိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။
COVID-19 ကြောင့် ညိုးနွမ်းသွားနိုင်တဲ့ အမျိုးသားတို့ဘဝ
ကိုဗစ်၊ ဝှေးစေ့ရောင်ခြင်းနဲ့ နောက်ဆက်တွဲပြဿနာ